Cebu Pacific dia mampiasa vola amin'ny olona manana fihenam-bidy
Home » Lahatsoratra farany farany » Fizahan-tany azo idirana » Cebu Pacific dia mampiasa vola amin'ny olona manana fihenam-bidy
Fizahan-tany azo idirana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Vaovao farany mikasika ny Filipina • Fandefasana gazety • tompon'andraikitra • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Cebu Pacific (CEB), dia kasaina hamoaka ny Liggeran'ny mpandeha sembana (DPL) amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe any Filipina. Ny DPL izay ahafahan'ny olona manana fihenam-bidy (PRM) manana traikefa mora sy milamina kokoa amin'ny sidina Cebu Pacific.
CEB no kaompaniam-piaramanidina voalohany mampiasa vola amin'ny DPL-ny azy manokana, mifanaraka amin'ny tanjony hanatsarana ny traikefan'ny mpandeha. Ny fampiasana ny DPL dia maimaimpoana ho an'ireo mpandeha Cebu Pacific izay mihena ny fivezivezeny. Ankoatr'ireo olona manana fahasembanana (PWD), ao anatin'izany ireo mpandeha bevohoka sy be taona izay mety manana olana amin'ny fiakarana tohatra hiakarana amin'ny sidina ataon'izy ireo.
CEB dia nanambola mihoatra ny PHP100 Million ho an'ny fividianana sy fametrahana DPL vaovao 35 vaovao. Ny DPL voalohany dia napetraka tao amin'ny Terminal Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 tamin'ny martsa 2017 ho an'ny fitsapana sy ny fanombanana. Hatramin'ny volana Jolay 2017, ny DPL dia nampiasaina hampiakarana ny PWDs, mpandeha bevohoka sy antitra amin'ny sidina CEB voafetra.
Michael Ivan Shau, filoha lefitra misahana ny seranam-piaramanidina seranam-piaramanidina Cebu Pacific dia nilaza fa ny sisa amin'ireo sampana DPL dia hapetraka manomboka amin'ny taona 2018. Vina enina hafa no hapetraka ao amin'ny Terminal 3 NAIA, ary ny ambiny dia haparitaka any amin'ireo foibe CEB hafa manerana ny firenena, izany hoe, Clark, Kalibo, Iloilo, Cebu ary Davao; ary koa seranam-piaramanidina mpandehandeha be manerana ny firenena miaraka amin'ny CEB miasa sidina mampiasa fiaramanidina Airbus. Ny famitana tanjona dia amin'ny Jona 2018.
“Izahay dia mijery hetsika hanatsarana ny traikefan'ny mpandeha isakyJuan. Ho an'ireo mpandeha PWD sy ireo izay mihena ny fivezivezena, dia fantatray fa ny traikefa amin'ny fananganana tanana dia mety tsy hahazo aina. Ny fampiasam-bola amin'ny DPL dia ahafahantsika miondrika sy mampihena ny mpandeha amin'ny fihenan'ny fivezivezena soa aman-tsara, miaraka amin'ny tsy fahazoana aina kely, "hoy i Shau.
Tamin'ny 2016 fotsiny dia mpandeha 43,000 mahery no nahazo fanampiana tamin'ny seza misy kodiarana tamin'ny kaontera fisavana. Amin'ity isa ity dia maherin'ny 14,000 no kodiarana avy teo amin'ny kaontera fanamarinana ary nentina tamin'ny toerany tao anaty fiaramanidina.
Ny DPL dia natolotry ny mpanome serivisy iraisam-pirenena momba ny seranam-piaramanidina amin'ny serivisy iraisam-pirenena- Fitaovana serivisy serivisy ho an'ny seranana mba hanomezana seranana azo antoka sy milamina ary mendri-kaja ny seranam-piaramanidina hahazoana PRM amin'ny sidina sy ivelan'ny fiaramanidina. Ny DPL dia mamela ny PRM, ary koa ny naman'izy ireo na ny mpiasan'ny serivisy hiakatra amin'ny fiaramanidina na mivoaka amin'ny alàlan'ny varavaran'ny fiaramanidina natolotry ny kaompaniam-pitaterana. Hatramin'izao dia 1998 DPL farafahakeliny no ampiasaina eran'izao tontolo izao.
Ho an'ireo PWD sy PRM hafa izay mila fanampiana amin'ny seza misy kodiarana dia mila manisy tsipika fotsiny ilay boaty izy ireo manondro an'io takiana io amin'ny famandrihana ny sidina.